2021 ee Cameroon: Adeegyada Kaabayaasha ku shaqeeya Waqtiga Lagu Sameeyo (Tribune Free)
ACCUEIL » SPORTS »2021 oo ku yaal Cameroon: Shaqooyinka Infrastructure waxaa lagu dhammeeyaa wakhtiga (Tribune Free)
2021 ee Cameroon: Adeegyada Kaabayaasha ku shaqeeya Waqtiga Lagu Sameeyay (Tribune Free)
Dhibaatada ugu weyn ee saadaalin la'aanta ah, iyo laga yaabo in ay la yaabto maskaxaha ugu murugsan, Cameroon waxay ku guuleysatay guushii ay gaartay guushii ay gaartay. Awoodda waddanku waxay abaabuleen munaasabad isboorti ah iyada oo la maareynayo in ay la kulanto xilliyo go'an.
Haddii qof kastaa ku raaco in falsafadani ay guul u tahay dhamaan dadka reer Cameroon, qof kastana wuxuu xusuusinayaa guusha shaqsiyadeed ee tani ay u tahay madaxweynaha Cameroon Paul Biya.
Marka uu u xilsaarayo Cup ee African Cup of Nations (CAN) 2019 2014 ee Cameroon, ee Confederation of African Football (CAF) ayaa markii hore tilmaamay in tartankan lagu qaban doono inta u dhaxaysa quruumaha 16. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo ay ka imanayaan madaxweynaha cusub ee CAF, M. Malagasy ah
Ahmad Ahmad, in 2017 dood cilmiyeed ah oo ka dhacaya Rabat kordhay tirada kooxaha ka qeyb 24, fufaya kordhiyo culayska for Cameroon. Haddii se 2019 la siiyey KARAA in Masar, maamulka Cameroon iyo bixiyeyaasha ayaa si kastaba ha ahaatee awoodo in gudbinta goobaha isboortiga, waddooyinka, dalxiiska, caafimaadka, iyo isgaarsiinta.
Wadooyinka, isbitaallada, hoteelada iyo habka isgaadhsiinta.
Waa suurtagal in la martiqaado dhacdo sidaas oo kale ah oo aan ku hareereynin dhismooyinka isboortiga iyo garoomada dhamaan qaybo istiraatiijiyadeed oo lagama maarmaan u ah munaasabadda socodka. Sidaa darteed mid ka mid ah caqabadaha ayaa ahaa in la dhiso waqtiyadan waqtigaan.
Sidaas daraadeed waa farxad weyn in la arko dhamaanba waddooyinka diyaar u ah 2019 taariikhda dhalashada ee u dhow kuwa la qorsheeyay.
Waxa uu arkay wadooyinka la dayactiray iyo kuwa kale oo ka xoq abuuray in waqti rikoor si ay ugu adeegaan marxaladaha iyo iyaga isku xiro si ay meelo kala duwan oo magaalooyinkii ay ku xiran tahay, oo ay ku jiraan hoteelo kuwaas oo ahaa mawduuca oo dhan u jeesan doonta inay dib u habayn ama dhisi cusub.
Meel kale oo ah xarun muhiim ah oo ku siman CIMO, sameynta tiknoolajiyada lagu baahiyo ciyaaraha adduunka ee u dhexeeya dalalka kala duwan ee Afrika ee ku hawlan. Mar labaad, Cameroon waxay diyaar u tahay tartan tiknooloojiyada kale waxaana ay bilaabeen in ay kor u qaadaan wadiiqooyinka isgaarsiinta waddanku si ay telefishinnada caalamka ee adduunka ah u heli karaan faafin tayo sare leh ee ciyaaraha.
Ugu danbeyntii wuxuu ku dhameystaa dhismayaasha isboortiga iyo garoomada
Dabcan, qalbiga kaabayaasha CAN 2021 ka kooban heerarka kala duwan kuwaas oo ah receptacles kulan oo kala duwan. Guusha waa kulmay Jhoti ee jilayaasha kala duwan, dawladda iyo dhismaha waaxda labadaba, sida aagga this, dib u dhac ayaa sidoo kale lagu arkay, loo sharciyeeyo habka aasaasay maamulka Cameroon oo dhan.
Inta badan xarumaha isboortiga ayaa durbadiiba taagan, finalka kama dambaysta ah ee garoomada qaar ayaa la dhammeeyaa dhowr toddobaad.
Shaqada adag ee Camerooniyiinta iyo hay'addu waxay dejiyeen si ay u daboolaan wakhtiyada kama dambaysta ah waxay u oggolaan doonaan dalka in ay gaarsiiyaan garoomada ka hor bartamaha 2019.
Sidaas darteed Cameroon ayaa diyaar u ah inay soo dhaweyso CAN 2021.
Heerka bilaashka ah
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/08/can-2021-au-cameroun-les-travaux-des-infrastructures-termines-dans-les-delais-tribune-libre/
Cameroon - Chantiers de la CAN: Maalgelinta waxay ka soo baxday 20 ilaa bilyan US Dollar FCFA toddobaadkii